Madaxweyaasha Ruushka iyo Faransiiska ayaa ka wada hadlaya Suuriya, Ukraine dhanka telefoonka – Walaal24 Newss
January 3, 2019	2	By walaal24
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiidha dejinta Suuriya iyo arrimaha Ukraine ee Arbacada.
Kremlin ayaa ku sheegay hadal ka soo baxay in labada madaxweyne ay baaritaan ku sameeyeen dhibaatooyinka degaanka Suuriya si faahfaahsan, ugu horreyntiina ay ka muuqato heshiis afar dhinac ah oo ku saabsan samaynta guddi dastuuri ah.
Putin, Macron, Jarmalka Chancellor Angela Merkel iyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isku raacay in la dhiso guddi dastuuri ah oo lagu dhiso guddi dastuuri ah 27-kii October ee Istanbul.
War saxaafadeed uu soo saaray Madaxweynihii Faransiiska, Macron ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee Faransiisku uu yahay dagaalka lagula jiro argagixisannimada si looga hortago kooxda argagixisada ISIS iyo ka hortagga dib u soo kabashada argagixisada gobolka.
“Dagaalkani ma socdo oo sii wadaan dhulka iyada oo qayb ka ah isbahaysiga caalamiga ah,” ayuu yiri madaxweynaha Faransiiska.
Macruuf ayaa sidoo kale sheegay in Faransiisku uu sii wadi doono dejinta siyaasadeed ee arrimaha Suuriya iyada oo la raacayo Xeerka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay 2254, habka kaliya ee suurtagalka ah ee xasilloonida, ilaalinta dadka rayidka ah iyo nabadda, sida lagu sheegay bayaanka Faransiiska.
Arrinta Ukraine, Macron wuxuu soo dhaweeyay heshiiskii lagu gaadhay Dec. 27, 2018 sidii loogu talagalay xabbad joojinta, waxana uu ku baaqay ixtiraam buuxa oo joogto ah, sida lagu sheegay bayaanka madaxweynaha Faransiiska.
Kremlin ayaa sheegay in labada madaxweyne ay iswaydaarsiiyeen aragtiyihii ku saabsanaa xiisadda Ukraine, iyada oo la tixgelinayo wixii ka dhacay Kerch Strait on November 25.
Xiisadda Moscow iyo Kiev ayaa kacsanayd ka dib markii Ruushku ku toogtay saddex markab oo maraakiibta badda Ukraine ay isku dayayeen in ay ku dhex marsiiyaan badda Kerch Badda Badda ee Badda Casov, iyaga oo ku eedeeyay inay ku dhufteen biyaha dhulka Ruushka.
Si kastaba ha ahaatee, dawladda Ukraine ayaa ku adkeysanaysa in ay u wargelisay dhinaca Ruushka horeyna u qabanqaabisay qareeno in ay difaacaan badmaaxiinta la qabtay.
Qaramada Midoobey oo maanta ka doodeysa go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku eriday Nicholas Haysom.
Xukuumadda XFS oo dib u dhis ku sameyneysa Garoonka kubbadda Cagta Cabdullaahi Ciise
Daawo: Xarunta Talo soojeedinta Soomaaliyeed oo war kasoo saartay saameynta Xernaashaha Wadooyinka Muqdisho